Trump wuxuu qiray guushii doorashada Biden: Qoraal buuxa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shacabka lahadlaya maalin kadib markii dad badan oo taageerayaashiisa ah ay weerareen xarunta baarlamaanka Mareykanka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo inaan wax ka qabto weerarkii foosha xumaa ee lagu qaaday Capitol-ka Mareykanka. Sida Mareykanka oo dhan waxaan uga careysanahay rabshadaha, sharci-darrada iyo buuqa.
Waxaan isla markiiba. Hawl galiyay Ciidanka Qaranka iyo sharci fulinta federaalka. Si ay u ilaaliyaan dhismaha una eryaan kuwa ku soo xadgudbay. Ameerika waa waana inay marwalba noqotaa ummad sharci iyo kala dambayn leh.
Waxaan la hadlaya mudaaharaadayaasha gudaha uu galay Capitol: waxaad nijaaseyseen kursiga dimuqraadiyadda ee Mareykanka. Sidoo kale kuwa geystey falalka rabshadaha iyo burburka: adigu ma matashid dalkeena. Kuwii sharciga jabiyayna: waad ka qomaameyn doontaan.
Waxaan hadda soo marnay doorasho aad u xasaasi ah shucuurtuna way sarreysaa. Laakiin hadda, dabeecadan noocaan ee kacsananta ah. Waa in la qaboojiyaa oo degganaansho lagu soo celiyaa. Waa inaan ka qeyb qaadano ganacsiga Ameerika.
Xubnah xafiiska Ololahaygu wuxuu si adag u raacay waddo kasta oo sharci ah oo aan ku heli karno xaqiida natiijada doorashada, hadafkeyga kaliya wuxuu ahaa inaan hubiyo daacadnimada codka shacabkeena. Markaan sidaas samaynayay, waxaan u halgamayay inaan difaaco dimuqraadiyadda Mareykanka.
Waxaan weli si adag u aaminsanahay inay tahay inaan dib-u-habeyn ku sameyno sharciyadayada doorashada si loo xaqiijiyo aqoonsiga iyo u-qalmitaanka dhammaan cod-bixiyayaasha iyo in la hubiyo rumaysashadda iyo kalsoonida dhammaan doorashooyinka mustaqbalka soo socda.
Hadda, Koongarasku wuxuu caddeeyay natiijooyinka. Maamul cusub ayaa la daah furi doonaa 20-ka bisha Janaayo. Waqti xadirkan waxaan ku baaqayaa bogsiin iyo dib u heshiisiin.
2020 waxay u ahayd waqti dhib badan dadkeena, masiibo halis ah ayaa galafatey nolosha muwaadiniinteena, malaayiin ku go’ddomiyey guryahooda, curyaamiyey dhaqaalaheena, waxayna galaafatay nolol aan tiro lahayn.
In laga adkaado cudurkan faafa iyo dib u dhiska dhaqaalaha ugu weyn ee dunida ayaa u baahnan doonaa dhamaanteen inaan ka wada shaqeyno. Waxaay u baahan doontaa xoojin cusub oo ku saabsan qiyamka madaniga ah ee waddaninimada, iimaanka, bulshada iyo qoyska.
Waa inaan dib u soo nooleynnaa isku xirnaanta xurmada leh ee jacaylka iyo daacadnimada, ee inagu wada xidheysa hal qoys oo qaran ku aftirsada. Ee muwaadiniinta dalkeena, u adeegida ahaan madaxweyne waxay ii ahayd sharaf intaan noolahay.
Dhamaan taageerayaashayda cajiibka ah. Waan ogahay inaad niyad jabsan tihiin, laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaad ogaato in safarkayaga cajiibka ah uu kaliya bilow yahay hadda.
Waad mahadsantihiin, ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahna ha barakeeyo America.
a aggravating humanitarian problem round
Mareykanka oo sheegay in xubno ka tirsan al-Shabaab